Nandrolone Decanoate (DECA) Abavelisi bepowder kunye nabaNikezeli-mveliso
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder, eyaziwa nangokuthi i-19-nortestosterone, i-androgen kunye ne-anabolic steroid (AAS) esetyenziswe ngendlela yeesters ezifana ne-nandrolone decanoate (igama lophawu lwegama elithi Deca-Durabolin) kunye ne-nandrolonephenylpropionate (igama legama elithi Durabolin) .
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) ividiyo
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder (360-70-3) Inkcazelo
I-Raw Nandrolone Decanoate powder akungathandabuzeki ukuba yinto yesibini eyaziwa ngeyona injectable steroid emva kwe Testosterone. Eli qela le-anabolic lilinganiswa njengenye yezilwanyana ezinobulunga ukugcina ubunzima obuxhamlayo kunye nokukhuthaza ukutya. I-anabolic androgenic steroid ezuze ukwamkeleka okukhulu phakathi kwabaqeqeshi bomzimba kunye nabadlali.
Ekuphuhlisweni kwasekuqaleni ukunyanga abantu abafumene izifo ezixhathisa izifo, i-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) i powder iyakwazi ukuphucula ubuninzi beethambo kunye nokukhula kwemisipha. Ukusetyenziswa kwale steroid kwithuba leeveki ezintandathu ukuya kweebhozo kunxulumene nokunyuka okuphawulekayo kwimveliso yeeseli ezibomvu zegazi kunye nokuphilisa iingxaki ezidibeneyo ezifunyenwe ngabanye abadlali ngexesha lokusebenza okukhulu. Le steroid ngokuqhelekileyo isetyenziswe ngexesha lokufumana amaninzi okanye izigaba zokutya kunye nenye yee-steroids ezimbalwa ezingasetyenziselwa kwixesha elide kunye nangaphambi komncintiswano.
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder Suqobo
Igama lemveliso I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder
Igama leKhemikhali Nandrolone decylate;19-Nortestosterone 17β-decanoate; 4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-DECANOATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE 17-DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE DECANOATE;17BETA-HYDROXY-19-NOR-4-ANDROSTEN-3-ONE 17-DECANOATE
uhlobo Numama Deca-Durabolin
Inani leCAS 360-70-3
I molecular Fi-ormula C28H44O3
I molecular WSibhozo 428.65
IMasaisotopic Mass 428.329 g / mol
Ukuxuba Point 33-37 ° C
Indawo yokubilisa 483.46 ° C (uqikelelo olunzima)
umbala I-White ukukhanyisa i powderstalline powder
Sukufaneleka 45% (w / v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg / mL
Aukuguquka Ekuqaleni kuphuhliswe ukunyanga abantu abafumene izifo ezixhathisa izifo, i-Nandrolone Decanoate inokuphucula ukuxinwa kweethambo kunye nokukhula kwemisipha kunye nokuphucula ngokuphawulekayo amaprotheni, ukugcinwa kwe-nitrogen, ukusebenza nokunyamezela.
Yintoni i-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3)?
Isiseko se-Nandrolone sisoloko sihlanganiswa kwi-hormone yokuzalisa i-hormone testosterone. Inokukunceda ukuvuselela izicubu zomzimba, ukwandisa umzimba kunye neethambo kunye nokukhuthaza ukubunjwa kweeseli ezibomvu zegazi. Kananjalo kunokwenza ukukhula kwemisipha, ukunyusa ukutya kunye nokunyusa ukuveliswa kweeseli zegazi kunye nobukhulu beethambo. Ucwaningo lwezonyango luye lwabonisa ukuba luncedo ekuphatheni i-anemia, i-osteoporosis kunye neendlela ezithile ze-neoplasia kuquka umdlavuza webele, kwaye yenza njengendlela yokukhulelwa kwe-progestin. I-Nandrolone ixhaphake ngokuthengisa njengento ye-decanoate ester (i-Deca-Durabolin) kwaye ingaqhelekanga njenge-phenylpropionate ester (iDurabolin).
I-powder Nandrolone Decanoate (DECA) ye powder (360-70-3) Sebenza
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder (360-70-3) Usebenzisa
I-Nandrolone nayo isetyenziselwe ukunyanga i-osteoporosis kubasetyhini, ngokutsho kweziko lootitshala bezonyango. I-Nandrolone ithuthukisa ukuhlanganiswa kwe-collagen emzimbeni kwaye ubuyisela ukulinganisela komzimba we-calcium ngokuqinisa amaminerali amathambo. I-Nandrolone nayo isetyenziselwe ukuphatha umdlavuza webele kunye nokunciphisa iimpawu ze-AIDS, ngokwewebhusayithi yeWiley InterScience. Ukwenza oku ngokukunceda ukuphelisa ukubola kwamanqatha omzimba kunye namandla omzimba ahlala ehlaselwa ngabagulane be-AIDS.
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder (360-70-3) benefits
I-Nandrolone isebenza ngokunyusa iitoni zomzimba kunye nobuninzi. Ukwenza oku ngokunceda umzimba usetyenzise nayiphi na iiprotheni ezidliwayo ngokufanelekileyo. Imiphumo ihlala yesikhashana kunye nokutya okunzulu kakhulu kwiprotheni kuyadingeka ukwakha ithoni ye-muscle ngokwaneleyo. I-Nandrolone inokunciphisa amaxesha okuphucula kwingozi kunye nokwandisa amanqanaba e-stamina ngokunciphisa ukukhathala emva kokusebenza. Ukwenza oku ngokunyusa izinga lokuhlutha kwe-muscle glycogen emva kolawulo olunzima lokuzilolonga. Oku kuthetha ukuba abadlali baqeqeshe ixesha elide ngaphandle kokukhathala. Ukusetyenziswa kweNandrolone akuyona kuphela into eyaziwayo phakathi kwababuciko, kodwa isebenza kakuhle kunyango lweemeko zempilo ezahlukahlukeneyo. Imiphumo emihle yechiza ibandakanya ukukhula kwemisipha, ukunyusa ukutya kunye nokunyuka kweefom zegazi kunye nokuxinwa kwamathambo. Ucwaningo lwezonyango luye lwabonisa ukuba luncedo ekuphatheni i-anemia, i-osteoporosis kunye neendlela ezithile ze-neoplasia kuquka umdlavuza webele, kwaye yenza njengendlela yokukhulelwa kwe-progestin.
Thenga i-powder Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) ukusuka eBuasas
I-Nandrolone Decanoate Uses, i-Cycle, Isisombululo, kunye neziphumo eziphazamisayo
Ulwaphulo lwe-Anabolic kwi-Medicine yamanje, uWilliam N. Taylor. , Iphepha 75-120
Iziyobisi, Abadlali, kunye nokusebenza kweMvelo, ehleliwe nguJohn A. Thomas, Page 27-30
I-Osteoporosis: I-Pathogenesis ne-Management, ehleliwe ngu-RM Francis, iphepha 101-130
I-Raw Dehydronandrolon powder (2590-41-2)